Description/subject: Executive Summary: "Asaresult of decades of ongoing civil war, large areas of Myanmar remain outside government rule, or are subject to mixed control and governance by the government and an array of ethnic armed actors (EAAs). These included ethnic armed organizations (EAOs), with ceasefires or in conflict with the state, as well as state-backed ethnic paramilitary organizations, such as the Border Guard Forces (BGFs) and People’s Militia Forces (PMFs). Despite this seeming recipe for chaos, there isastartling level of order in most of these areas. This order has been created in large part through customary justice mechanisms at the community level, and asaresult of justice systems administered by EAAs, and in some cases by ethnic paramilitary organizations. In EAO-controlled areas, their justice systems are often the only formal structures present, while in mixed-control areas, government and EAA justice systems exist separately, but side by side. The village, and village-based justice mechanisms, are the glue that provides stability and order for most civilians in these areas. Often reliant onalong tradition of customary law and practices, village heads and village justice committees handle civil disputes and petty crimes – the bulk of justice issues in these areas. EAAs have built their justice systems on top of the village structures, relying on them to handle most justice issues, while requiring more serious crimes to be handled in EAO courts, which are also available for appeals from the village level. On paper, at least, EAA justice systems are hierarchical, allowing for referral up the chain from village tract to township to district to the center. These structures, often backed by official procedures, also provide for the assignment of progressively more serious cases and progressively more severe punishments at each level. Judicial procedures differ between organizations, with some followingamore formal model while other systems are more rudimentary. In practice, there may be variation from established procedures due to the ebb and flow of conflict, the capacity of an organization inagiven area, or the personal connections of an individual to members of an EAA. Internal security for most EAOs is provided by their regular soldiers and militia they establish at the local level. These formations commonly function as arresting agencies as well as jailers. A few EAOs have established police forces dedicated to preserving public order among the populace. Criminal investigations are usually conducted by EAO administrative authorities, except in the case of the Karen National Union (KNU), which hasapolice force authorized for this. Village customary justice and EAA justice structures have continued to maintain order in EAA areas through periods of conflict and ceasefire. Without the EAA justice systems and the stabilizing effect of village customary justice structures, this order and stability would have been far less likely. 1 In many areas of Myanmar where EAAs operate, the central government has only ever had tenuous control, if any control at all. The ability of EAOs to maintain order andadegree of justice in turn contributes to their legitimacy among the population they claim to represent in areas they control, in mixed-control areas, and often to some degree in government-control areas adjacent to conflict zones where members of the group’s ethnic base also reside. The rule of law and the workings of Myanmar’s justice system are receiving increasing attention, while the role and structure of EAO justice systems and village justice remain relatively little studied or understood. The continuity and stability of village justice systems provide the bedrock on which official justice systems – the government’s and the EAOs’ – are built, and thus are important to maintaining order and stability across the country. The fact that EAO justice systems operate in parallel with that of the government in large areas of the country, and provide the only means of justice for large portions of the population, should indicate their importance for the peace process as well as for the future governance of Myanmar"
Title: Ethnic Armed Actors and Justice Provision in Myanmar - တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အုပ်စုများ၏ တရားစီရင်ရေးစနစ်များ ဘရိုင်ယန် မ�
Description/subject: အဓိကအချက်များကောက်နှုတ်ချက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပွါးနေသော ပြည်တွင်းစစ်၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် မြန်မာတောင်တန်းနယ်မြေအများစုသည် အစိုးရထိန်းချုပ်မှု ဘောင်အပြင်ဖက် သို့မဟုတ် အစိုးရ နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဓိကဇာတ်ကောင်များ (EAAs) ၏ ထိန်းချုပ်မှု၊ အုပ်ချုပ်မှု ရောထွေးနေသော အနေအထားအတွင်းတွင် ရှိနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဓိက ဖာတ်ကောင်းများ (EAAs) ] ဟုဆိုရာတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ (EAOs) (အပစ်ရပ်ထားသော (သို့မဟုတ်) ပဋ္ဋိပက္ခဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသော) အပြင် နယ်ခြားစောင့်တပ်များ (BGF) နှင့် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့(PMF) တို့ ကဲ့သို့သော အစိုးရနောက်ခံပြု တပ်မတော်ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ လက်နက်ကိုင်ထားသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ (State-backed ethnic paramilitary organization) ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသည်ဟုထင်ရသော်လည်း ၎င်းနယ်မြေအများစုတွင် ဥပဒေစိုးမိုးရေး စတင်မှုအဆင့်တွင် ရှိနေကြပြီဖြစ်သည်။ ယင်းဥပဒေစိုးမိုးမှု သည် ရပ်ရွာအဆင့်တွင် ဓလေ့ထုံးတမ်းအရ တရားစီရင်ခြင်းစနစ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဓိက ဇာတ်ကောင်များ (EAAs)၊ တခါတရံ တပ်မတော်ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ လက်နက်ကိုင်ထားသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ (ethnic paramilitary organization) စီမံခန့်ခွဲသော တရားစီရင်မှုစနစ်တို့ကြောင့် နေရာအတော်များများတွင် အဓိကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ထိန်းချုပ်သော နယ်မြေများတွင် ၎င်းတို့၏ တရားစီရင်မှုစနစ်များသည် တရားဝင်ပုံစံ တစ်ခုတည်းသာရှိသော်လည်း ထိန်းချုပ်မှုရောယှက်နေသော နယ်မြေများ တွင်မူ အစိုးရနှင့် လက်နက်ကိုင်ထားသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ၏ တရားစီရင်မှုစနစ်များသည် သီးခြားစီတည်ရှိနေသော်လည်း ရပ်တည်ချက် မှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းနယ်မြေများရှိ အရပ်သားအများစုအတွက် တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးမှုတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသောအရာမှာ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအခြေပြု တရားစီရင်မှု စနစ်များဖြစ်သည်။ အဆိုပါနယ်မြေများတွင် အဖြစ်များသော တရားမကြောင်းနှင့် အသေးစားရာဇဝတ်မှုများကို ကျေးရွာသူကြီးနှင့် ကျေးရွာတရားစီရင်ရေးကော်မတီများက အစဉ်အလာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေများကို အမှီပြု၍ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလေ့ရှိကြသည်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဓိကဇာတ်ကောင်များ(EAAs)သည် ၎င်းတို့၏ တရားစီရင်မှုစနစ်များကို ကျေးရွာဖွဲ့စည်းပုံ၏ ထိပ်တွင်ထည့်သွင်းထားပြီး ယင်းတို့ကို အမှီပြု၍ အမှုကိစ္စများကို ကိုင်တွယ်ကြသည်။ ပြင်းထန်သောရာဇဝတ်မှုများကိုမူ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ (EAOs) ၏ တရားရုံးများတွင် ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပြီး ၎င်းတရားရုံးများသို့ ကျေးရွာအဆင့်မှ အယူခံလွှာတင်သွင်းနိုင်သည်။ စာရွက်ပေါ်မှ ဖွဲ့စည်းပုံအရ EAO များ၏ တရားစီရင်မှုစနစ်များသည် အထက်မှအောက်သို့ အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရပ်ကျေး၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ ဗဟိုအဆင့်ဆင့်တင်ပြရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ တရားဝင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖြင့် ပံ့ပိုးထားသော ၎င်းတရားစီရင်မှုစနစ်များသည် အဆင့်တိုင်းတွင် ပိုမိုပြင်းထန်သော အမှုအခင်းများကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ပိုမိုပြင်းထန်သော ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ရန် ခွင့်ပေးထားသည်။ EAO များအကြား တရားစီရင်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကွာခြားမှုရှိပြီး အချို့က ပုံစံတကျရှိမှုကို လိုက်ပါကျင့်သုံးကြပြီး အချို့က အခြေခံကျလွန်းသောပုံစံကို ဆုပ်ကိုင်ထားကြ သည်။ လက်တွေ့တွင်မူ ပဋိပက္ခ သံသရာ၊ နယ်မြေအတွင်း အဖွဲ့အစည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ EAA အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်နွယ်မှု စသည်တို့ကြောင့် ရေးဆွဲထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကွဲပြားမှုများရှိနိုင်သည်။ EAO အများစုအတွက် အဖွဲ့တွင်းလုံခြုံမှုကို ၎င်းတို့၏ အမြဲတမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒေသတွင်းအဆင့်တွင် ၎င်းတို့ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များက တာဝန်ယူကြသည်။ ၎င်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပင် တရားခံဖမ်းခြင်း၊ အချုပ်ခန်းစောင့်ကြပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ရပ်ရွာအတွင်း လူထုလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်၍ ရဲဌာန ဖွဲ့စည်းထားသော EAO အနည်းစု ရှိသည်။ ရာဇဝတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် ရဲဌာနကို အခွင့်အာဏာပေးထားသော ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) အဖွဲ့မှလွဲလျှင် များသော အားဖြင့် EAO အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များက လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ ကျေးရွာဓလေ့ထုံးတမ်းတရားစီရင်မှုနှင့် EAAများ၏ တရားစီရင်မှုစနစ်များသည် ပဋ္ဋိပက္ခကာလနှင့် အပစ်ရပ်ကာလများတစ်လျှောက် ဥပဒေစိုးမိုးမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ဆက်လက် တည်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ EAA များ၏ တရားစီရင်မှုစနစ်များ နှင့် တည်ငြိမ်စေသည့် သက်ရောက်မှုရှိသော ကျေးရွာဓလေ့တရားစီရင်မှု မရှိပါက ဤသို့တည်ငြိမ်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပေ။1 မြန်မာနိုင်ငံရှိ EAA များလှုပ်ရှားသော နယ်မြေအများစုတွင် ဗဟိုအစိုးရအနေနှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိခဲ့လျှင်လည်း အနည်းငယ်သော ထိန်းချုပ်မှုသာလျှင် ရှိသည်။ EAO များ၏ ဥပဒေစိုးမိုးမှုနှင့် တရားစီရင်မှု ထိန်းသိမ်း နိုင်စွမ်းသည် ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်သော နယ်မြေများ၊ ထိန်းချုပ်မှုရောနှောနေသောနယ်မြေများ၊ နှင့် ရံဖန်ရံ ခါသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ နေထိုင်ပြီး ပဋိပက္ခဇုန်များ နှင့် ကပ်နေသော အစိုးရထိန်းချုပ်နယ်မြေများအချို့ရှိ ၎င်းတို့ကိုယ်စားပြုသည့် လူထုအသိုင်းအဝိုင်းများအကြားတွင် တရားဝင်မှု ရရှိနိုင်စွမ်းအပေါ်တွင် အပြန်အလှန်အားဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ EAO များ၏ တရားစီရင်မှုစနစ်များ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကျေးလက်တရားစီရင်မှုပုံစံများကို အနည်းအကျဉ်းမျှသာ သိရှိနားလည်သေးသော်လည်း ဥပဒေစိုးမိုးမှုနှင့် မြန်မာ့တရားစီရင်မှုစနစ်များ အလုပ်လုပ်ပုံတို့အပေါ် ကျေးလက်တရားစီရင်မှုစနစ်များ၏ စဉ်ဆက်မမြတ်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုတို့ သည် အစိုးရနှင့် EAO များ၏ တရားဝင်တရားစီရင်မှုစနစ်များ တည်ဆောက်ရန် အမာခံအုတ်မြစ်သဖွယ် ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း တည်ငြိမ်မှုနှင့် အေးချမ်းမှုထိမ်းသိမ်းရေး၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြသည်။ EAO တရားစီရင်မှု စနစ်များက နိုင်ငံ၏နယ်မြေ အများစုတွင် အစိုးရတရားစီရင်မှုစနစ်များနှင့် အပြိုင်လည်ပတ်လုပ်ဆောင်နေပြီး လူထုအသိုင်းအဝိုင်းအများစုအတွက် တရားစီရင်မှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ ဖြစ်နေသောအချက်ကြောင့် ယင်းစနစ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂါတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အရေးပါကြောင်း ညွှန်ပြသင့်ရှိသည်။
Description/subject: Abstract: "Burmese colonial history suggests thatalegal system cannot operate independently from the felt needs of the people who are supposed to obey the law. Despiteamonopoly of force for many decades, the British failed to createasustainable legal system in Burma. Colonial status shifted Burma’s economic role from subsistence agriculture to the generation of large-scale exports. By undermining the traditional Burmese legal system and substituting Western international standards of property rights, enforceability of contracts, and an independent judiciary — all attributes of what some consider to be the “Rule of Law”— the legal system amplified and channelled destructive economic and social forces rather than containing them. This paper examines traditional Burmese law, the administration of law in British Burma, and the consequences of the new legal system for the country and its own stability. The paper concludes by suggesting lessons for Myanmar today, and for the study of the “Rule of Law." ..... Keywords: Rule of Law, colonial law, law and custom, law and development, colonial administration, Burma, Myanmar
Description/subject: Focus on Karen refugees....."The force of habit, the awe of traditional command andasentimental attachment to it, the desire to satisfy public opinion - all combine to make custom be obeyed for its own sake. In this the ‘savages’ do not differ from the members of any self-contained community withalimited horizon, whether this be an Eastern European ghetto, an Oxford college, oraFundamentalist Middle West community. But love of tradition, conformism and the sway of custom account but toavery partial extent for obedience to rules among dons, savages, peasants, or Junkers. [. . .] in the main these rules are followed because their practical utility is recognized by reason and testified by experience." (Malinowski 1926).....Re the attached sales flyer for the book, the publishers say thatapaperback version will be out in July or August.
Description/subject: "We lawyers just cannot help being Darwinian. We simply cannot shake off our assumption that some legal cultures are more developed than others. We prefer written law to oral law; we are happier with professional judges than with people’s rough justice; and — need I say? — we just love cultures that have their own lawyers.".....Re the attached sales flyer for the book, the publishers say thatapaperback version will be out in July or August. (Andrew Huxley 2011)